Gawaarida fardaha, dib u eegis kooban oo ku saabsan taariikhdeeda, noocyadeeda iyo adeegsigeeda. | Fardaha Noti
Gawaarida fardooleyda: taariikhda, noocyada iyo adeegsiga
Jenny monge | | kuwa kale
Gawaarida farduhu waa gawaarida oo ka kooban sanduuq weyn kuwaas oo yeelan kara qaabab kala duwan iyo taas oo ku taal laba ama afarta taayir. Gawaarida waxaa loo isticmaali jiray tan iyo wakhtiyadii hore in lagu qaado alaabada ama dadka.
Gaadiidka noocan ah waxay hoos uga dhacday isticmaalkeeda muuqaalka gawaarida mootada. Waqtigaan la joogo, waa la adeegsadaa inta badan dhacdooyinka ama munaasabadaha gaarka ah, sida xafladaha qaarkood ama aroosyada, isticmaalkeedu sidoo kale waa mid soo noqnoqda ujeedooyin dalxiis ama, kuwa ka qiimo badan, waa la arki karaa waxaa loo beddelay qaybo madxaf ah.
1 In yar oo idinka mid ah taariikh
2 Noocyada gawaarida fardaha
3 Fursado faras-faras
3.6 Cidhiidhi ah
Gawaarida faras sida, midka sanduuqa santuuqdiisa lagu laalay ama lagu dhejiyay ilo biyo ah, oo leh laba albaab oo dhinac ah, oo leh daaqado muraayadaha ah iyo kuraas ay fadhiyaan laba, afar ama in ka badan, Waxay u muuqataa qiyaastii qarnigii XNUMXaad. Waqtigan ka hor horeba waxaa u jiray nooc kale oo gaadiid ah oo ay jiidayaan equines, si fiican loo yaqaan ayaa ah gaadhifaraskii Roomaanka tusaale ahaan. Inkastoo shaki la’aan kii kahoreeyay waa gaariga, oo aan gadaal ka hadli doono.
Waxaa jira daraasado meeshaas yaal intii u dhaxeysay 1546 iyo 1554 imaatinka gaarifaraskii ugu horreeyay ee Jasiiradda Iberia. Wixii intaa ka dambeeyay waxay helayaan caan.
Isticmaalkoodu wuxuu noqday mid aad u baahsan oo gaadhay heer ay ahayd in laga mamnuuco meelaha qaarkood, isticmaalkooda waa la xadiday ama waxaa laga mamnuucay noocyada gawaarida qaarkood waxaa jiiday tiro fardo ah oo cayiman. Waxaa loo diiday codka shaqsiyaadka qaaska ah; noocyada qalabka qaarkood ayaa la aasaasay ama laga mamnuucay qurxinta gawaarida lafteeda, iwm.
Dhammaan mamnuucyadan ayaa isbedelayay wax yar ka badan laba qarni, qaarkood ayaa laga noqday isla waqtigaas in mamnuuc ka duwan uu soo baxay. Tusaalooyin yar oo ka mid ah mamnuucyadan ayaa ah:
Sannadkii 1578, Felipe II wuxuu mamnuucay faras-qaadyada faraska ilaa ay jiidayaan afar fardood oo ay leeyihiin milkiilaha gaadhigu.
Sanadkii 1600 Philip III, ayaa loo ogolaaday gawaaridaas iyo gawaarida ay jiidayeen laba faras.
Carlos II sanadkii 1678, wuxuu mamnuucay isticmaalka bajaajta iyo gawaarida kale, marka lagu daro inuu mamnuucayo isticmaalka baqlaha iyo ragga.
Sanadkii 1785 Carlos III, wuxuu mamnuucay in ka badan laba baqal ama fardo lagu raro gawaarida rua.
Noocyada gawaarida fardaha
Qaabkiisa ama shaqadiisa, Gawaarida faraska waxaa loo qaybin karaa:
Gawaarida wadada, taasi waxay ahayd loogu talagalay safarada dhaadheer iyada oo ay ugu wacan tahay naqshadeynta raaxada leh ee loogu talagalay dadka safarka ah.
Gawaarida gawaarida, waxaa jiiday baqallo lagu qurxiyay qoorta, sidaas awgeed magaca.
Baabuurka socda, waa midka kuraasta albaabbada ku leh.
Gaariga hadiyadaha ama gaariga Rúa, loo adeegsaday masaafo gaaban magaalooyinka gudahooda maxaa yeelay noocyada kale ee howlaha ama safarada, nooc kale oo baabuur ah ayaa ka raaxo badnaa.
Gaariga dhejiska, wuxuu wataa laba ulood oo farasku qabatimay.
Gawaarida dogob, oo la mid ah kii hore, laakiin halkii ulaha ay ku yeelan lahayd dogob hoose.
Gawaarida Nickel, Waxay ahayd kiro laakiin kuma jirin bandhiga baabuurta wadada.
Xilliyadii kala duwanaa iyo shaqooyinkii kaladuwanaa ee ay soo mareen gawaarida farasku, waxay nooga tageen tiro fara badan oo noocyo kala duwan ah qaab ahaan iyo magac ahaanba. Aynu baranno qaar ka mid ah:
Waxaan ku bilaabeynaa gawaarida, kahoreeyay gawaarida faraska iyo, sidaa darteed, mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee lagu raro faraska. Waxay ka kooban tahay sanduuq yar oo ku yaal laba ama afarta taayir. Sanduuqa ayaa ah meel lagu xareeyo meesha badeecada ama dadka la geeyay iyo in si toos ah u taagay giraangiraha ama qaar ka mid ah nidaamka ganaax taas oo ku kala duwan hadba meesha iyo waqtiga. Wadamada bilaha badankood ay noqdaan kuwa baraf wata, gawaarida waxaa lagu abaabulaa skate, noqoshada nooc ka mid ah sleds.
Gaariga yimaadda Yurub sannaddii afraad ee Miilaadiga waxayna ku soo badanayay noocyo kala geddisan oo magacyo iyo adeegsiyo kala duwan leh, oo ay ka mid tahay faras qaadashada Marka loo eego caadooyinka goobta, waxaa ku jiidi karay fardo, baqallo, dibi, dameero ama xayawaan kale, xitaa dadka.
Gaadhig laba taayir leh oo daboolan ee xoogaa yar ama ka yar oo dhar adkaysi leh iyo qalab fudud Waxaa loo yaqaan 'Carromato'.
Waa a gaari faras aad u weyn, la mid ah saloon laakiin hodannimo iyo hawl kar ah lagu qurxiyey. Wuxuu watay afar toosh, midba gees walba dhinac walbana muraayad buu ku xidhay. Socday jiido afar, shan ama in ka badan oo faras ah oo loo habeeyay qaab caano.
Bilowgii waxay ahayd gaadiid ciidan, laakiin way isbedeshay oo qarnigii laba iyo tobnaad, iyadoo tallaabooyin yaryar laga qaaday, ayay noqotay a gaari raaxo iyo astaan ​​u ah awooda dhaqaale iyo booska bulshada. Waxay noqotay mid si gaar ah moodada ugu dhex martay amiirrada.
Maanta waxaa loo isticmaalaa qoysaska boqortooyada dabaaldegyo waaweyn.
Suurtagal mid ka mid ah ereyada ugu isticmaalka badan, oo ay weheliso gawaarida, si looga hadlo gawaarida faraska iyo xitaa in la qeexo waxay yihiin, waa: gawaarida.
Dhammaanteen waxaan leenahay fikrad yar oo maskaxda ku haysa sida gaadhigu u eg yahay, laakiin ma taqaanniin noocyo badan oo gawaari ah taasi jirtaa? Qaarkood waa: Berlina, Biga, Estate, Brougham, Coupe, Stagecoach, Phaeton, Galley, Planter, Mateo, Simón, Victoria, iwm. Dhammaantood, aan iftiimino afar:
Gawaarida oo sanduuqa uu gebi ahaanba xiran yahay, isagoo ah qeybta kore ee afargeesleyaasha, halka qeybta hoose ay tahay wareeg ama qaab doon ah. Waxay leedahay meel afar kursi ah albaabaduna waxay leeyihiin muraayad. Magaca gawaarida noocan ah waxay ka timid Berlin, magaalada ay ka yimaadaan gawaarida ugu horreeya ee farasku.
Gawaarida wadada oo sanduuqoodu uu yaalay afarta taayir. Qaybta kore waxay ku lahaayeen khadad ay ku xareeyaan boorsooyinka dadka safraya. Daa’uudka gadaashiisa, iyo dusha sare ee gaadhiga iyo hore ee jidhada kor lagu soo sheegay, sariir, kursi isweydaarsi ah ayaa laga furay xagga hore iyo meel saddex qof ah. Steakooyinku waxay ahaan jireen gaadiid joogto ah inta udhaxeysa laba magaalo iyagoo maraya wado go'an. Yaan waligiis arkin dhac loo geystay masraxa filimka cowboy?
Gawaarida waa weyn oo lagu diyaariyey afar giraangiraha iyo gudaha gudaheeda oo ay ku fadhiyaan lix ama sideed qof. Daboolka dhar aad u adkaysi badan ayaa lagu taageeray siddooyin alwaax ah iyo cawsduur ka soo baxay dhinacyada. Furitaanka hore iyo kan dambe ayaa lagu dabooli karaa daahyo.
Gawaarida hoose ee afarta taayir. Waxay leedahay albaab dhinac walba kaga yaalliin giraangiraha dhexdooda. Daboolka wuxuu ku yaal dabool lafilan karo ama shiraac. Waxay leedahay boos laba kursi ah. Sanduuqa wuxuu kuxiran yahay qeybta hore oo ay kuxirantahay gooseneck fittings sidoo kale waxaa sidoo kale kuyaala kursi wareegaya oo kuyaala feeraha, oo ah darawalka. Qeybta cayayaanka waxay kursi uga fadhiisan kartaa cagaha.
En Waqtiyadii Boqortooyada Roomaanka, gaadhifarasku wuxuu ahaa a Gaadhifaras ay wataan afar faras oo saf ah, sidaa awgeed magaceeda. Waxay ahayd qaab gaadiid oo ay isticmaali jireen jeneraalada Roomaanku markay soo galaan magaalooyinka iyaga oo guulaystay. Tani waa sababta keentay in qaar badan oo ka mid ah meelihii guusha laga gaadhay ay taaj ku yeeshaan taaj gaadhifaras.
Sanduuqa yar ayaa lahaan jiray booska hal qof laakiin kuraas ma jirin, qofkani wuxuu qabtay caloosha intuu taagnaa.
Kala duwanaanta oo leh laba faras halkii afar, loo yaqaan 'biga', waxaa horey loogu isticmaali jiray xilliyadii Griigga iyo Masaaridii.
Gawaarida fardaha, landau waa mid ka mid ah kuwa ugu raaxada badan. Waxaa loo tixgeliyaa raaxo, waa gaari qafiif ah oo sanduuqiisa uu ku socdo afarta taayir. Waxay noqon kartaa labadaba mid furan iyo mid xiran. Gudaha, kuraasta waxaa loo qaabeeyey si is barbar socda.
Salkiga ama sulki waa a gawaarida yar yar ee loo adeegsado dhulka miyiga ah ka yimid meelo badan oo adduunka ah, inuu qaado mid ama laba rakaab ah badanaa. Waa qaab dhismeed iyo qaabeyn fudud oo fudud.
Sanduuqa waxaa lagu hagaajiyey laba taayir oo waaweyn. Faraska wuxuu ku biirayaa sanduuqa aad u gaaban sidaa darteedna wuxuu dhex marayaa lugaha wadaha, oo cagihiisa ay taageerayaan qaansooyin lagu diyaarshay ulaha xayawaanka ku haya.
Waa a gaari yar oo yar oo sanduuqiisa lagu hagaajiyo laba giraangirood. Kursiga darawalku waa loox saf ah oo ku lifaaqan sanduuqa halka uu kula kulmayo shaashadda saxda ah. Waxay leedahay a dusha sare Qaybta hore waxay ku xidhan tahay loox sida caadiga ah leh laba kiristaalo. Dhinaca kale, dhabarku wuxuu ku xiran yahay albaab.
Waa hab lagu gaadiid dhaqameed Ruush ah, oo saddex faras ay ku jiidaan cirif.
Waxay gaari kartaa inta u dhexeysa 45 iyo 50 km / saacaddii, taas oo qarniyadii XNUMXaad-XNUMXaad ahayd xawaare aad u weyn. Muhiimadan, dhanka ay ahayd la xidhiidha safarka masaafada dheer.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » kuwa kale » Gawaarida fardooleyda: taariikhda, noocyada iyo adeegsiga
Fardaha loo yaqaan 'Appaloosa' iyo jaakaddooda kala soocda leh
Buugaagta faraska ugu fiican: buugaag, buugag iyo sheekooyin.